Idayi eqhubekayo yombala: umbala ogqithiseleyo okanye ubunwele obubi?
Imibala engapheliyo inezinzuzo kunye nokungonakali. Inzuzo eyona mibala yimibala kukuba idayi yakho ihlale idayi. Nangona kunjalo, iifolo eziqhubekayo zingonakalisa iinwele zakho. Iinkcukacha ezongezelelweyo malunga nokusetyenziswa kweepende eziqhubekayo ziya kuxutyushwa kule nqaku.
Ziziphi iimpawu eziqhubekayo?
Ipeyinti eqinile iphosa inwele, kodwa inonakalisa iinwele ngaphezu kweeyunithi zesikhashana zesiqhelo, ukuhlawula i-shampoos kunye ne-balms. Kwaye ukuba uyisebenzisa kakubi le peyinti, ke esikhundleni sokuba umbala omhle kunye neengqungquthela ezikhazimulayo ungakwazi ukufumana iinwele ezonakalisiweyo, ezomileyo nezingqhekekileyo.
Nayiphi na ipeyinti engaxhatshazi iqukethe izithako ezibandakanyekayo kunye neekhemikhali ezinobungqangi ezinceda ukupenda ukungena kwi-hair shaft kunye nebala. Ngamaxabiso amancinci ezi zinto zikhuselekileyo kubantu, kodwa ngubani obhetele - kunzima ukuphendula.
Ngethuba lwakutshanje kwii-shelf unokufumana iimveliso ze-bezammiachnoy. Kukholelwa ukuba upende olunjalo luphephile ngokupheleleyo. Kodwa ixabiso layo likhulu kakhulu, ngoko ke zonke iintombazana zingakwazi ukufumana upende. Ukongeza, abanye abavelisi esikhundleni salolu hlobo basebenzise i-peroxide elula, ephinda iphanga iinwele. Ngoko ke, ngaphambi kokuthenga upende, funda ngokucophelela ukubunjwa kwayo. Ukuba kukho i-oxidizer, ke akukho ndawo yokuhlawula imali ngokugqithiseleyo kwi-brand okanye ukuhanjiswa kweentengiso.
Ipeyinti eqhubekayo kufuneka isetyenziswe ukupenda iinwele ezimvu, njengepende eqhelekileyo kuya kunceda ukujamelana nale ngxaki. Kuza kufuneka ubenokubhenela kwidayi eqhubekayo kwaye kwimeko apho ufuna ukufumana umthunzi ogcweleyo, oza kuhlala kwizinwele zakho ixesha elide.
Kukho umgangatho omnye ongenakuwulibala - yithuba lokubhenkceka kweenwele kwiinwele. Ipeyinti engapheliyo kufuneka igcinwe ngokukodwa njengoko umenzi ocebisayo, ukuba uyayigqitha ngaphezu kokuba uyifunayo, ngoko xa uhlamba, uya kufumanisa iinwele eziphosiweyo. Ukuba uhlala ungaphantsi, awuyi kuzuza nayiphi na umphumo, njengoko akuyi kuba yinkqubo ye-oxidation kwaye izinto aziyi kungena kwiintonga zeenwele.
Iingxaki zobunyoyi bezinwele eziqhubekayo
AmaAmoniya nezinye iikhemikhali azizange zenze nantoni na inwele. Idayi ephindwe kabini kunye nexabiso elibizayo lobugcisa obunzima luza kwenza ukuba iinwele zakho zibe zincinci kwaye zincinci. Emva kokusebenzisa imibala enjalo kuya kufuneka usebenzise rhoqo iimveliso ezizodwa zokuzicoca: i-shampoos, iilms, masks.
Ukuzihlaziya iinwele ezinemibala engapheliyo akukhuthazwayo. Ekubeni kungekhona bonke abaqeqeshiweyo abanokuyifaka kakuhle iinwele ngeemveliso ezinjalo, ngoko ke, ukuba bathetha ntoni kwabatsha? Ukuba kukho into engalunganga ngexesha lokutshatyalaliswa, awukwazi ukuqonda ukuba kutheni inwele ayifumananga nomthunzi ofanayo. Ukongezelela, emva kokulinga okunjalo, amaninzi amantombazana ahamba kunye neenwele zawo zinyuka kunye nombala ongaqondakaliyo.
Iinjongo zepeyinti eqinile
Inzuzo ephambili yale mveliso kukuba ihlala ixesha elide kwizinwele. Ungakwazi ukuhlalisa ilwandle ngokukhuselekileyo, uhlambe elwandle okanye echibini kwaye ungesabi ukuba upende uya kuhlamba kwizinwele, kwaye kwilweleni okanye kwinqwelo yokubhukuda kuya kuba neminye imizila. Ukuba uya kubamba iingcambu zeenwele zakho ngexesha, akukho mntu uyazi nokuba yintoni umbala wakho onwele.
Ukuba awufuni ukulimaza iinwele zakho, qiniseka ukuba uthenge iimveliso eziphezulu kuphela, eziqulethe izinto ezibuyisela isakhiwo seenwele kunye nokuzikhusela kwimiphumo emibi yendalo. Ingaba luncedo, iivithamini, ioli, iifriji njalonjalo.
Nika ukhetho lwakho kuphela kwiipalini eziphezulu eziveliswa ngamagama awaziwayo. Zikhuselekile kwaye ukusetyenziswa kwazo akuyi kubakho kwimiphumo emibi.
Indlela yokubala imibala ngepeyinti eqhubekayo
Naluphi na upende kufuneka luhlolwe kwindawo engabonakaliyo yesikhumba. Ngenxa yoko, faka upende kwi-bbow bow. Emva kwemizuzu emihlanu, hlamba. Ukuba ngaphakathi kwintsuku i-uvass ingabonakali ukuphendulwa komzimba, ngoko unako ukuqhubela phambili.
Izinwele ze-Nekraste ngexesha lokuya esikhathini. Ngaloo mihla i-hormone ishintsha, ngoko udweba awukwazi ukwenza okanye ungayifumana enye imthunzi. Kwakhona, awukwazi ukunxiba iinwele zakho kunye nomama ogxininisiweyo kunye nabamncelisayo, ngokuba izinto ezinobuthi zingena kumbutho womntwana. Akukhuthazwa ukuba udaye iinwele kulabo abakhanyisa i-veneer okanye benze imvume. Emva koko, kufuneka kuthathe ubuncinane iiveki ezimbini ukuba iinwele zifumane enye.
Ngaphambi kokuba umbala, uhlambe intloko, kwaye ipeyinti ibe kunye neenwele zibhetele, kwaye i-fat fat will reduce the impact of aggression of peinture. Ukuba unezinwele ezinde, ngoko ufuna iimpakethi ezimbini zepende.
Ungayisebenzisi endaweni yebrashi ekhethekileyo yokutshiza isiponji, i-toothbrush kunye nezinye iindlela ezicwangcisiweyo. Njengoko umphumo ungenakulinganiswa.
Ngaphambi kokuba ugqoke iinwele kunye nepeyinti eqhubekayo, cingisisa, kodwa ufuna ngokwenene. Emva kwemibala enjalo, kuya kuba nzima ukubuyisela umbala wakho weenwele. Ndiza kufuneka ndilinde de ibe ikhulile.
Izinwele ezidaywe: yintoni elandelayo?
Ngona upheyinti olungaphephekanga uhlanjululwa kancinci. Ngoko ke, ukuba ufuna ukugcina umbala ocebileyo weenwele ezinde, uya kufuneka usebenzise i-shampoos ekhethekileyo kunye neenkompo zokugqithisa iinwele. Akunakwenzeka ukusebenzisa ii-masks, eziqulethe amaninzi amanqatha. Ezi maski ziya kuhlamba umbala ngokukhawuleza. Zifanelekile kuphela kwezo ntombazana ezinamawele a-blonde okanye abo bafuna ukulahla ubumnyama.
Amanye amantombazana emva kokusetyenziswa kwamathambo kuphela ama-shampoos abantwana. Bakholelwa ukuba ii-shampoos ezinjalo ziqulethe izinto ezinobungozi kunye nokuba zincedo ngakumbi. Enyanisweni, oku akunjalo. Musa ukuhlamba intloko yakho kunye ne-shampoos ye-baby, njengoko beyichitha isakhiwo seenwele. Sebenzisa kuphela ama-shampoos akhethekileyo kwiinwele ezinemibala, ngokubuyisela amafutha kunye nezinye izithako. Ukuba iinwele zisesimweni esimpofu, sebenzisa izibilini ezikhethiweyo, ama-lotions okanye iimaski ezixutywe kwisikratshi.
Ukuba uthanda ukuhlamba intloko phantsi kwamanzi ashisayo, kufuneka uzinikele. Ukongezelela, amanzi ashushu awonakalisa nje iinwele ezinemibala, kodwa nakwabomi bezempilo. Emva kokuhlamba intloko, kubalulekile ukuhlamba iinwele zakho ngamanzi aqhelekileyo okanye ahlambulukileyo, apho kuyimfuneko ukongeza i-citric acid, iviniga okanye isardadi. Emva kokuhlanjululwa kwentloko i-pH iqhelekile kwaye i-chlorine iyahlanjululwa, echaphazela kakubi iinwele kwaye inokukhokelela ekuhlaleni.
Ukuba usoloko usebenzisa i-hairdryer, i-ironing curling, i-ironing okanye i-hair, kufuneka uqiniseke ukusebenzisa izixhobo ezikhethekileyo ezikhusela iinwele kwi-thermal exposure. Ngaphandle koko, iinwele ziza kukhawuleza. Ukupakisha, unike okukhethwa kukho imithi yamadaka kunye ne-mousses, equle iingubo zepeyinti.
Farewell, grey: zokupheka zezona zinto zihamba kakuhle kwi-hair shampoos
I-vitamin supplements ekhethekileyo - ukukhusela okunamandla kweenwele kunye nezipikili
Izinwele - ikratshi labesifazane bonke
Ukulungiswa kweenwele ezibukhali
Iimfashiso zeentombi zamabanga esikolweni
Indlela yokuxelela umntwana ngezilwanyana
I-chum salmon kwi-foil
Ngaba ndilala ebusweni sam?
I-Savoy iklabishi casserole
IJam ukusuka kumpu (Kiev)
Quesada kunye nenkukhu
Ukunyuselwa koNyaka omtsha 2017: zokupheka ezilula kunye ezihleko kunye neefoto - Yintoni yokupheka uNyaka omtsha we-Firecracker
Nini ukutshata ngo-2013
Nguwuphi umdlalo onokuyidlala nomntwana?
Amathunya amhlophe, nemiphumo emibi
Ikhumba njengengane: I-TOP-3 zokupheka ezifanelekileyo zekhofi
UAna Grachevskaya wazikhangela ekuphandeleni ubuhle, isithombe
Inguqulelo entsha yeso sizathu sokugula okubi kukaJeanne Friske
Iklabishi isitshizi kunye neepasta eziluhlaza, amazambane kunye
Ukuphulukisa iimpawu zeparsley